Ezona Thermometers ze-aquarium ezilungileyo, zeziphi ezona zithembekileyo? | Ngeentlanzi
Ithemometha ye-aquarium sisixhobo esisiseko esinceda ukugcina amaqondo obushushu e-aquarium phantsi kolawulo ngokupheleleyo. Ke sinokwazi xa sijonga kuqala ukuba amanzi akashushu onke, okanye ayabanda onke, kufanele ukuba ibe yinto ebaluleke kakhulu ukuba sifuna ukugcina iintlanzi zethu zisempilweni kwaye zingenaxinzelelo.
Nangona kunjalo, sinokuba nemibuzo emininzi malunga nayo: loluphi uhlobo olulungileyo? Yintoni ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa uyifaka? Kwezinye iimeko kunyanzelekile ukuba ubenethemometha ye-aquarium? Siza kuphendula le mibuzo ingezantsi. Ukongeza, sicebisa ukuba ufunde eli nqaku linxulumene noko amaqondo obushushu afanelekileyo kwintlanzi yetropiki yasemanzini.
1 Ezona Thermometer zibalaseleyo kwii-aquariums
2 Ngaba kufanelekile ukuba ne-thermometer kwi-aquarium?
3 Iindidi zethemometha ye-aquarium
3.5 Ngendebe yokutsala
3.7 Isifudumezi samanzi esine-thermometer eyakhelweyo
4 Kweziphi iimeko apho kukho ubushushu kwi-aquarium kunyanzelekile?
5 Uyibeka njani ngokuchanekileyo ithemometha kwi-aquarium ukuze ithembeke
6 Kwenzeka ntoni ukuba ithemometha yasemanzini iyaphuka
Ezona Thermometer zibalaseleyo kwii-aquariums
Ithemometha kaMealth ...
I-Thermometer yokuzonwabisa ephindwe kabini ...
I-Tetra TH yedijithali ...
Ngaba kufanelekile ukuba ne-thermometer kwi-aquarium?
Ithemometha ye-aquarium ihlala iluvo olulungileyo, kwaye ayisiyiyo kuphela imeko yeetropical aquariums, ezifuna ubushushu obuphezulu, kodwa kuzo zonke iintlobo zamanzi. Ithemometha, Ngokukuvumela ukuba ujonge ubushushu bamanzi, kuyanceda ukubona ukuba amaqondo obushushu ayatshintsha ngamaxesha ahlukeneyo emini, okanye nokuchonga iingxaki ezinokubakho kubushushu bamanzi ekufuneka usombulule ukuze iintlanzi kunye nezityalo zakho zisoloko zisempilweni.
Kwaye oko Inkqubo yendalo ye-aquarium yinto ebuthathaka kakhulu, efuna ubushushu obuzinzileyo ukuze yonke into ingayi esihogweni. Utshintsho kubushushu, umzekelo, lungenza iintlanzi zakho zigule, njengoko naluphi na utshintsho emanzini luyeyona nto ibangela uxinzelelo kubo. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba nesixhobo, ukuze ukwazi ukukhangela idatha amaxesha amaninzi ngemini (ngakumbi ukuba utshintshe amanzi etankini okanye emva kokutya), ukuze nangaliphi na ixesha uyazi imeko yayo.
Iindidi zethemometha ye-aquarium
Phakathi kweethemomitha zamanzi kukho iindlela ezahlukeneyo, nganye ineenzuzo zayo kunye neengxaki, njengoko siza kubona ngezantsi:
Ithemometha zangaphakathi, njengoko igama lisitsho, zibekwe ngaphakathi kwi-aquarium, ukuvumela ukufundwa ngokuchanekileyo kwamanzi. Kwakhona, ukuba une-aquarium enkulu kakhulu, ungasebenzisa ezininzi ngexesha ukuqinisekisa ukuba onke amanzi abubushushu obufanayo. Zithanda ukuba ngexabiso eliphantsi kwaye kukho iintlobo ezahlukeneyo ukuze ukhethe efanelekileyo efanelekileyo kwiimfuno zakho kunye nezo zasemanzini, umzekelo, ngekomityi yokutsala, enobunzima bokuntywila, bokuntywila ...
Nangona kunjalo, baneengxaki ezithile, ezinjengezabo fragility ukuba zenziwe ngeglasi, ke ayizilungelanga i-aquariums eneentlanzi ezinkulu, okanye ubunzima bokufunda iqondo lobushushu njengoko kunganyanzelekanga ukuba zincanyathiselwe kwiglasi ye-aquarium.
ZHITING Ithemometha yeLCD ...
Isikrini seLCD yindlela ezi ntlobo zethemometha ezibonisa ngayo ubushushu, ikwabizwa ngokuba yidijithali. Ukongeza kwiscreen, esiya ngaphandle kwe-aquarium, bathabatha iqondo lobushushu ngesokethi ebekwe ngaphakathi emanzini, eyenye yeendlela ezifanelekileyo esiza kuzifumana ukubona ubushushu apho amanzi akhoyo.
Kwakhona, Ngokwesiqhelo isikrini sikhulu kakhulu kwaye isivumela ukuba siwabone amanani ngokujonga ngokulula, okubonelela ngokulula okongeziweyo.
Iithemomitha zedijithali ngokungathandabuzekiyo eyona isebenzayo xa kuziwa kukulawula ubushushu bamanzi kwi-aquarium yethu. Uninzi luqulathe umboniso obonisa iqondo lobushushu, elibekwe ngaphandle kwe-aquarium, kunye nesenzi sokubekwa ngaphakathi (yiyo loo nto zisebenza kakuhle ekulinganiseni iqondo lobushushu, kuba azichaphazeleki bubushushu bangaphandle). Olunye ukhetho olunomdla kakhulu ukuba ezinye iimodeli zibandakanya yi-alamu elumkisa ukuba amaqondo obushushu amanzi anyuka okanye awe kakhulu.
Inye kuphela kodwa yile zezona zibiza kakhulu ukusuka kuluhlu, kwaye ezinye zinentambo yoluvo emfutshane ngandlela ithile, kuyacetyiswa ukuba ujonge kufutshane nokubalulwa ngaphambi kokuyithenga.
UMarina Fluval 11198 Nano ...
Eyona yakudala yeklasikhi: Ithemometha yeglasi ikuvumela ukuba ulinganise ubushushu bamanzi ngendlela yakudala. Bahlala befaka ikomityi yokutsala okanye babunjwe njengenduku yokuyixhoma kwiglasi kwaye bagcine ukuma nkqo, okwenza kube lula ukubona ubushushu. Kananjalo, zitshiphu kakhulu.
Nangona kunjalo, banobunzima obukhulu, ubuqhophololo babo, ke ayilulo ukhetho olucetyiswayo lwee-aquariums ezinentlanzi enkulu okanye enovalo. Kwelinye icala, bathambekele ekubeni namanani amancinci kakhulu, ekunokuba nzima ukuwafunda.
Ithemometha yeGasea ...
Iikomityi zokufunxa yenye ye Iindlela eziPhambili zokugcina ii-Thermometers ze-Aquarium zilungile. Zidla ngokuba ziimodeli ezinamaxabiso aphantsi kakhulu ezenziwe ngeglasi, iplastiki okanye ezinomtya olula.
Nangona iyasebenza kwaye indalo, iikomityi zokutsala zinokubuyela umva ngokucacileyo, kwaye oko kukuthi ziyawa rhoqo, enokuba yindumasi ukuba kuya kufuneka sijonge ubushushu ngamaxesha ahlukeneyo emini.
16 Isilinganisi-manzi seAquarium...
I-Thermometers enesitikha Zithanda ukuba ngumtya olula wokubambelela apho kuphawulwa khona ubushushu bamanzi, kodwa zibekwe ngaphandle. Njengoko besesitshilo ngaphambili kwimeko yeethemomitha zeLCD, zitshiphu kakhulu, kodwa, nangona kunjalo, azithembekanga kwaye kufuneka silumke ukuba sizibeka elangeni, kuba azinako ukunika ubushushu ngqo apho amanzi .
Okokugqibela, enye inzuzo inxulumene nokusebenza kwezi thermometers, ukusukela oko Inamanani amakhulu atshintsha umbala njengamaqondo obushushu e-aquarium ahluka (kancinci njengamakhonkco eemood). Ngokuba namanani amakhulu, kulula ukuwafunda.
Isifudumezi samanzi esine-thermometer eyakhelweyo
Taoxin Calentador Acuario...
Okokugqibela, enye yezona mveliso zinomdla esiza kuzifumana kwihlabathi leethemomitha zasemanzini zizifudumezi ezinesixhobo sokulinganisa ubushushu esakhelweyo. basivumela ukuba sibulale iintaka ezimbini ngelitye elinye: ukufudumeza amanzi (into ebaluleke kakhulu kwi-aquariums ngeentlanzi zetropiki) kunye nokulinganisa ubushushu ihlala ihleli njengoko ichukumisa.
Impazamo enye abayibonisayo, nangona kunjalo, kukuba ithemometha ayinakuqaphela nakuphi na ukungasebenzi kakuhle kwesifudumezi, kuba, iyimveliso efanayo, ukuba inempazamo inokuchaphazela isifudumezi kunye nesixhobo sokubonisa ubushushu.
Kweziphi iimeko apho kukho ubushushu kwi-aquarium kunyanzelekile?
Sele sithethileyo ngaphambili ukuba ne-thermometer kwi-aquarium yethu phantse inyanzelekile, kodwa iba sengqiqweni ngokupheleleyo kwezi meko zilandelayo:
En los I-aquariums yetropiki, Ukufudumeza amanzi kunye nokuwagcina phakathi kwe-22 kunye ne-28 degrees, ithemometha kufuneka. Ezinye iimodeli zide zibe noluhlu lobushushu lubonisiweyo, ukuze ubone ngamehlo ukuba iqondo lobushushu lichanekile okanye hayi.
Al tshintsha amanzi e-aquarium Ithemometha ikwasisixhobo esibalulekileyo, njengoko inokusilumkisa ngokutshintsha kwamanzi. Iintlanzi zinovakalelo olubi kakhulu kutshintsho lobushushu anokuba nalo amanzi, nekunokwenzeka ukuba ziqhelekile xa zisenza utshintsho lwamanzi.
Okokugqibela, ithemometha nayo iyasebenza Ndikuxelele ukuba imbawula yamanzi iye yasilela ukuze ungakhange uqaphele. Kungenxa yoko le nto sibonisile ukuba licebo elilungileyo ukuba nesifudumezi esizimeleyo kunye nethemometha, ke uya kuba nokuqiniseka ukuba bobabini basebenza ngokuzimeleyo.
Uyibeka njani ngokuchanekileyo ithemometha kwi-aquarium ukuze ithembeke
Impendulo yeli candelo iya kuxhomekeka kakhulu kuhlobo lweethemometha esizisebenzisayo, kuba nganye inendlela eyahlukileyo yokusebenza. Njengokuba:
Los Iithemometha zesitikha zisetyenziselwa ukubekwa ngaphandle kwe-aquariumNgesi sizathu, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ekhethekileyo ukuba ingazibeki ngqo elangeni okanye kufutshane nomthombo wobushushu okanye womoya obandayo (njengokufudumeza okanye umoya opholileyo).
Ngokukwanjalo, ezi thermometers ichanekile kancinci kwii-aquariums ezinkulu, kuba ukuba neendonga ezijiyileyo kunokungabonakalisi ubushushu bamanzi obuchanekileyo.
Los Iithemometha zangaphakathi kufuneka zisoloko zibekwe phezu kwegrabile ukusukela emazantsi etanki ukuze ukwazi ukubona ngokucacileyo ukufunda (kwaye ngokuchanekileyo, kunjalo).
Kwimeko ye Ithemometha edadayo, kufuneka igcinwe emanzini ukuze ikwazi ukubonelela ngokufunda ubushushu obuchanekileyo.
Ukuba ufuna ukuqinisekisa ukuba ithemometha yakho yokufunxa ngekomityi ayizukuvela, okanye uneentlanzi ezikhubazekileyo ezinokuyihambisa ngokulula, yongeza ikomityi yesibini yokutsala ukuyikhusela.
Soloko uzama ukuba ithemometha, nokuba luhlobo luni na, soloko uhlala kude nesifudumezi samanzi ye-aquarium, kuba oku kunokuchaphazela iqondo lobushushu elibhalisiweyo.
Kwii-aquariums ezinkulu kakhulu, Unokuba nee-thermometer ezininzi ezithe saa ujikeleze indawo ukugcina iqondo lobushushu likwinqanaba elifanelekileyo kwaye uthintele ukuhla kwehlelelo ukuba kungenzeki.
Olunye uncedo lokuba neethemomitha ezimbini kwi-aquarium efanayo yile ikuvumela ukuba ubone ukuba ngaba enye yezi zinto zombini iyasilela kwaye kuye kwakho utshintsho lobushushu emanzini.
Okokugqibela, kubalulekile ukuba beka ithemometha kwindawo engaziphazamisiyo iintlanzi kodwa kwangaxeshanye ikuvumela ukuba wenze ufundo ngokujonga nje kube kanye.
Ungalibali jonga kwimiyalelo yakho yethemometha Ukuqinisekisa eyona ndlela yokuyisebenzisa kunye nokufumana okuninzi kuyo, kuba imodeli nganye yahlukile.
Kwenzeka ntoni ukuba ithemometha yasemanzini iyaphuka
Ngaphambili, oomakhulu bethu bathatha iqondo lethu lobushushu ngeethemomitha ezintle kakhulu, bezaliswe lulwelo lwesilivere oluhle kakhulu kodwa olunetyhefu kakhulu, imekyuri. Nangona okwangoku kunqabile okanye kungavumelekanga kwaphela ukusebenzisa i-mercury ekwenziweni kweethemometha, kunokuba yindlela eqhelekileyo kwiimodeli ezindala, ngenxa yoko. Kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba ithemometha oza kuyisebenzisa ayenziwanga yile ntoNgaphandle koko, ukuba iyaqhekeka, inokutyhefa iintlanzi zakho kwaye ingcolise amanzi.
Ngethamsanqa ithemometha zale mihla azenziwanga ngemekyuri, kodwa nezinye izinto ezivumela ukufundwa okuthembekileyo kobushushu, njengotywala obudaywe babomvu. Kwimeko apho enye yezi thermometer iqhawukayo, ngethamsanqa iintlanzi zakho aziyi kuba sengozini yokufa, kuba utywala abunabungozi.
Ithemometha ye-aquarium kufuneka ukuba sifuna ukuba ubushushu be-aquarium yethu bungaguquki. iintlanzi zethu zisempilweni kwaye zonwabile. Ukongeza, kukho iintlobo ezininzi kakhulu esingasokuze sizifumane ezingahambelani neemfuno zethu kunye nezo zeentlanzi zethu. Khawusixelele, ukhe wazama naziphi na ezi ntlobo zethemometha? Ukhetha ntoni? Ngaba ucinga ukuba sishiye nayiphi na ingcebiso ukuba siyinike?
Imithombo Izilwanyana zasekhaya, Ukugcinwa kwamanzi emanzini
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » Ithemometha ye-Aquarium